एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठनमा लफडा
काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनमा विवाद भएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले न्यायाधीशहरु काममा फर्किनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राहत हुनेगरी विज्ञप्ति निकालेका बेला अध्यक्ष रुद्रप्रसाद
एमालेमा यसरी छानिनेछन् महाधिवेसन प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेकपा एमालेले महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि छनौटको प्रावधानलाई स्पष्ट पारेको छ । कात्तिक १२ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) १३ जारी
एमाले अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ‘पूर्ण प्रतिपक्ष’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सबै सरकार गुमाएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य ६८ दिनमै राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमाले अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पूर्ण प्रतिपक्ष
एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन : महाधिवेशन प्रतिनिधि को हुने ? कसरी छनौट गर्ने ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेकपा एमालेले महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि छनौटको प्रावधानलाई स्पष्ट पारेको छ । कात्तिक १२ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) १३
‘चुनावपछि एमालेको हालत नोकियाजस्तै हुन्छ’
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीले आगामी निर्वाचनपछि एमालेको हालत नोकियाजस्तै हुने बताएका छन् । शंखरापुरमा पार्टीको नगर कमिटी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले भने, ‘चुनावपछि एमालेको
काठमाडौं । नेकपा एमालेले शुक्रबार महाधिवेशनको मापदण्ड र कार्यतालिका पारित गर्न भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेको थियो । तर, बैठकमा माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका नेता प्रभु साह निकट दुई नेतालाई
१०औं महाधिवेशनका लागि एमालेले २७ कात्तिकमा प्रतिनिधि चयन गर्ने, यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडौं । नेकपा एमालेले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि २७ कात्तिकमा प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २७ कात्तिकमा एकैदिन देशभरबाट प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन गर्ने
एमालेले बढायो महाधिवेशन प्रतिनिधि: ४ सय थप, कात्तिक २७ मा प्रतिनिधि निर्वाचन
काठमाडौं । नेकपा एमालेले १० औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको संख्या थपेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मंसिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि स्थायी कमिटीले
काठमाडौं । नेकपा एमालेको आसन्न १० औं महाधिवेशनमा १,५३६ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । आज (बिहीबार) बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या टुंगो लगाएको हो । हाल एमालेको